Ọ DARA NA-ECHICHE ỌB OFR OF AKW DKWỌ AKW DKWỌ AKA?
Industrylọ ọrụ Digital Signage na-eto eto n'afọ n'afọ. Ka ọ na-erule afọ 2023, atọrọla ahịa Digital Digitalage ka etolite ruru ijeri $ 32.84. Igwe teknụzụ aka bụ akụkụ na-eto eto ngwa ngwa nke na-akwalite ahịa Digitalage Signage ọbụna n'ihu. Ejiri teknụzụ Ahịa Infrared Touchfra ọdịnala nke e ji mee ihe na ngwa azụmahịa Agbanyeghi teknụzụ ohuru ohuru achoro nke eji eme ihe na smartphones ka eji emeputa ya. N’ụwa juputara na ihu igwe Smart Touch na tebụl ụfọdụ na-ebu amụma na Touch Screens bụ ọdịnihu maka ụlọ ọrụ Digital Signage. Na blọọgụ a, m ga-enyocha ma nke a ọ dị ma ọ bụ na ọ bụghị .The mkpọsa ụlọ ọrụ na-edepụta ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ahịa Digitalage Signage mana ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-aga n'oge na-enye nsogbu. Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị akwusila mkpọsa ma na-akpata nsogbu n'okporo ụzọ dị elu. Withlọ ahịa dị ebe a na-ere asọmpi na-agbanwe agbanwe, ha ga-agbanwe ụzọ ha ga - esi mee ka ndị ahịa si n'ụlọ ha banye n'ụlọ ahịa. Ntinye aka aka bụ otu ụzọ ha nwere ike isi mee nke a, enwere ike iji mmetụ mmetụaka aka iji nyere ndị ahịa aka ịchọta / ịtụ ngwaahịa na ịtụle ihe karịrị omimi dịka ọmụmaatụ. Site na iji ngosipụta dị ka Kiosks PCP Touch Touch ha bụrụ ndọtị nke ndị ahịa na-enweta ụdị ha na smartphones na kọmputa. Enwere ike iji ụdị teknụzụ a iji nye ndị ahịa ahụmịhe nke onwe ha ma mee ka ha tinyekwuo aka na ngwaahịa na akara ahụ. Innovation bụ ebe ndị na-azụ ahịa nwere ike ịme ihe dị iche, yana ihe ngosi pụrụ iche dịka PCP Touch Touch Mpempe ihu ha ha nwere ike ịmepụta ahụmịhe nke ndị na-azụ ahịa nwere ike nweta naanị site na ị bata n’ụlọ ahịa.
Otu ụlọ ọrụ ebe Digitalage Akara ngosi na-agbanwe akụkụ ha bụ na Restaurantslọ Ọrụ Ọrụ Ndenye (QSR). Ahịa ndị na-eduga ụdị ngwaahịa QSR dị ka McDonalds, Burger King na KFC amalitela ịgbanye bọọdụ Dijitalụ na Mmekọrịta Mmetụta Mmekọrịta nke onwe gị n'ofe ụlọ ahịa ha. Restaurantslọ oriri na ọ haveụ haveụ ahụla uru nke usoro a dị ka ndị na-eri nri na-atụkarị nri ka ukwuu mgbe ha na-enweghị nrụgide oge ahụ; na-eritekwu uru. Ọtụtụ ndị ahịa na-enwekwa mmasị na ụdị mmetụaka taabụ ndị a n'ihi na n'ozuzu ha ekwesịghị ichere ogologo oge ka ewere ikike ha wee ghara inwe nrụgide ịtụ ngwa ngwa dịka mgbe ha guzo na tebulu. Dị ka ngwanrọ ịtụgharị si adịwanye mfe, m na-ebu amụma na Touch Screens ga-aghọ ọkọlọtọ n'agbụ nri ngwa ngwa.
Ọ bụ ezie na ahịa nke taabụ metụ aka n'ime ụlọ ọrụ Digital Signage na-etolite ebe enwere ihe abụọ na - egbochi ya ugbu a. Isi okwu dị na imepụta ọdịnaya. Contentmepụta ọdịnaya ihuenyo mmetụ adịghị mfe / ngwa ngwa ka ọ ga-adị. Iji ebe nrụọrụ weebụ gị na ihuenyo mmetụ aka adịchaghị eweta uru ịchọrọ ọ gwụla ma you mepụtara ọdịnaya kwesịrị ekwesị maka ịkwa nka gosipụtara maka ebumnuche. Mepụta ọdịnaya a nwere ike iri ezigbo oge ma dịkwa ọnụ. Ego anyị ji arụ ọrụ aka CMS dị mma na-enye ndị ọrụ aka ịmepụta ma jikwaa ọdịnaya maka Touch Screens. Dijitalụ Akara Digital AI buru amụma na ọ ga - abụ nnukwu ihe ọzọ na - eme n'ime ụlọ ọrụ ahụ nke nwere ike iwepụ ihe a na - elekwasị anya na Ntinye ihu, na nkwa nke ọdịnaya dị ike zụrụ ahịa na otu dị iche iche. Touch Screens onwe ha ejirila aka na -echeta akụkọ na - ezighi ezi n'oge na-adịbeghị anya, site na ebubo nke ngosipụta ndị na - adịghị ahụ mma ruo nkwupụta nke akpaaka na - ezighi ezi n'ịrụ ọrụ.
Touch ScreensPILLL ga-abụ nnukwu akụkụ nke ọdịnihu nke ụlọ ọrụ Digital Signage, ọtụtụ uru nke teknụzụ mmekọrịta a ga-eme ka ụlọ ọrụ dị elu. Dika okike oyuyo maka Touch Screens na-akawanye mma ma nwekwaa ike inweta ihe ndi mmadu ndi mmadu nwere ike ibu ihe ya. Ekwenyeghi m na Touch Screens n'onwe ha bụ ọdịnihu, na-arụ ọrụ n'akụkụ Digital Signage Digital na-enweghị mmekọrịta ọ bụ ezie na ha nwere ike ịkele ibe ha maka ụzọ edozi niile.